Madaxweynaha Somaliland Oo Daah-furay Wejiga Labaad Ee Qorshaha Horumarka Qaranka JSL Ee (2017-2021)
Qorshaha Horumarinta Qaranka waxa diyaarisay Wasaaradda Qorshaynta Qaranka JSL
Hargeysa, 29 Juulaay, 2017–Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Md. Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo), ayaa Daah furay Wejiga labaad ee Qorshaha Horumarinta Qaranka Somaliland (The National Development Plan II – 2017-2021).
Xaflada daah-furka shirkan oo lagu qabtay Ambassador Hotel ayaa waxa ka soo qaybgalay Madaxweynaha JSL, Madaxda Axsaabta, Masuuliyiin ka kala socday Gollayaasha Qaranka, Wakiilo ka socda Hay’adaha Qaramada Midoobay, Hay’adaha Caalamiga ah, Ururada Bulshada, Laamaha iyo hay’adaha dawladda, Jaamicadaha, Saxaafada iyo marti sharaf kale.
Shirkan uu Madaxweynuhu furay ayaa Wasaaradda Qorshaynta Qaranka iyo Horumarinta Somaliland oo Masuul ka ah Qorshaha Horumarinta Qaranku waxay ku soo bandhigtay waxyaabaha la doonayo in wax laga qabto muddada u dhaxaysa 2017-ka illaa 2021-ka oo uu ku taariikhaysan yahay Wejiga Labaad ee Qorshaha Horumarinta Qaranku.
Agaasimaha Waaxda Qorshaynta Mubaarik Cabdillaahi Dal-Jir, ayaa ugu horreyn faahfaahin ka bixiyey qaybaha uu ka kooban yahay barnaamijkan Qorshaha Horumarka Qaranka ee labaad, isagoo ka warramay waxyaalaha uu kaga duwan yahay kii hore, isla markaana tilmaamay inuu ku sallaysan yahay xogtii laga soo ururiyey Degmo ilaa Gobol.
Wejiga labaad ee Qorshahan Horumarinta Qaranka oo qayb ka ah Qorshaha guud ee Qaranka Somaliland ee 2030-ka, ayaa Wasaaradda Qorshayntu sheegtay in muddadaa Mudnaanta la siinayo, lagana shaqaynayo Arrimaha ay ka midka yihiin, Yaraynta Saboolnimada, Abuurista Fursado Shaqo, Dhiiri-gelinta Ganacsiga iyo Maalgashiga Caalamiga ah, Kor u qaadidda Wax-soo-saarka Dalka; Dalagga Beeraha, Kalluumaysiga iyo Arrimo kale oo muhiim u ah Horumarinta Nolosha Shacabka Reer Somaliland Miyi iyo Magaalaba.
Qorshahan oo Wasaaradda Qorshayntu muddo diyaarinaysay, ayaa la doonayaa inay ku shaqeeyaan Hay’adaha Caalamiga ah ee Somaliland ka taageera Horumarinta Adeegyada aasaasiga ah, halkii awal hore Hay’ad kasta si Madax-bannaan Dalka uga fulin jirtay Mashruuc ay Qorshihiisa samaysatay.
Munaasibadda lagu furay Wejiga labaad ee Qorshaha Horumarinta Qaranka oo ay ka qayb-galeen Wasiirro, Hoggaamiyeyaasha Xisbiyada Qaranka, Hay’adaha Somaliland taageera Qaarkood iyo Daneeyayaal kale, ayaa waxa ugu horreyn hadal uu ku sharraxayo Ujeeddada Shirkan oo ka furmay Huteelka Maansoor ka soo jeediyey Wasiirka Wasaaradda Qorshaynta Qaranka Maxamed Ibraahim Aadan (Qabyo-tire), waxaanu yidhi “Waxaynu leenahay yool ah siday Somaliland u ekaan doonto 2030-ka, yoolkaasi wuxuu hiigsanayaa sidii loo heli lahaa Dal deggan, Nabad ah, Dimuqraadiyad ah, Dadku haystaan una siman yihiin Dhammaan adeegyada kala duwan iyo kaabayaasha Nolosha.”
Wasiir Qabyo-tire oo hadalkiisa sii wattaa wuxuu sheegay “Xukuumaddu waxay sannadkii 2012-kii ku dhaqaaqday in laga midho-dhaliyo hiigsiga, lana Abuuro Qorshe Qaran 2012-2016-kii ku ekaa. Markii uu dhammaaday Qorshihii Qaran ee 2012-2016 waxaanu samaynay Qiimayn, waxaana soo baxday in Hay’ado badan oo Dawli ah ama Caalami ahi aanay ku dabaqin Barnaamijkii horumarineed, Maaddaama oo ay innagu cusbayd Nidaamka Qorshaha Qaranku. Haddaba Annaga ka faa’ideysanayna dhacdooyinkaas iyo kuwii ka soo baxay Qiimayn aanu ku samaynay Qorshaha cusub ee 2017-2021-ka siday noqon lahayd waxaanu la waddaagnay dhammaan Hay’adaha iyo ururrada Bulshada ee ku shaqada leh. Nasiib-wanaag ah in Hay’aduhu noogu dhego-nuglaadeen inay nagala qayb-qaataan Barnaamijka, Barnaamijkaasi oo aanu ka soo bilownay Heer Degmo, Heer Gobol illaa Heer Hay’adeed.” Ayuu yidhi, waxaanu intaa ku daray “Barnaamijkan oo aanu ka shaqeynaynay muddo laba Sanadood ah wuxuu soo maray Marxalado kala duwan. Qorshaha guud ee Horumarinta Qaranka waxa Muc u ah Saddex Arrimood, kuwaasi oo kala ah yaraynta Saboolnimada, kor u qaadidda u adkaysiga Masiibooyinka ka dhasha Isbeddelka Cimilada iyo Ilaalninta xuquuqda Aadamaha. Sidaasi darteed Somaliland waxa ka go’an inay masuul ka noqoto dhismaha Aayaheeda dhaqaale, si ay Dhallinyaradeeda u siiso waxay u qalmaan, waxaanu ku faraxsannahay in Qorshahani horseedi doono horumar laga gaadho Adeegyada Bulshada iyo la dagaalanka Saboolnimada. Ugu dambayn Qorshaha Horumarinta Qaranku wuxuu xoojinayaa sidii Mucaawimooyinka ay Somaliland Gooni ugu noqon lahayd, qorshahaasi oo la jaan-qaadi doona meeqaamka gaarka ah ee Dalalka Adduunka.”
Furitaanka Shirka Wasaaradda Qorshayntu ku soo bandhigay Wejiga Labaad ee Qorshaha Horumarinta Qaranka, waxa sidoo kale ka hadlay Masuuliyiin kala duwan oo ay ka mid yihiin xubno ka mida golaha Wasiiradda Hoggaamiyeyaasha Xisbiyada Qaranka, Xubno ka socday Hay’adaha Caalamiga ah iyo kuwa Maxaliga ah, waxaanay dhamaantood ku bogaadiyeen Wasaaradda Qorshaynta dadadaalka ay kaga midho dhalisay dhamaystirka qorshahan
Gabagabadii Munaasabada ayaa Madaxweyne Axmed-Siilaanyo khudbaddiisa waxa uu kaga warramay Marxaladihii kala duwanaa ee Somaliland u soo martay Heerka ay Maanta taagan tahay iyo waxa loo sameeyay Qorshaha Horumarinta Qaranka, waxaanu yidhi “Mudanayaal iyo Marwooyin, Jamhuuriyadda Somaliland, waxay halkan ku soo gaadhay hayaan dheer iyo halgan qadhaadh, oo marxalado kala duwan soo maray. Tan iyo intii aynu xornimadeena la soo noqonay, waxaynu ku guulaysannay inaynu dhidibbada u taagno dhismaha qaran madax-bannaan, iyo nidaam dawladeed oo dhammaystiran.
Eebbe Mahaddii, waxaynu ku guulaysannay nabad iyo xasilooni buuxda, taas oo ku timid midnimada, wada-jirka iyo iskaashiga Ummadda Jamhuuriyadda Somaliland. Waxa hubaal ah, in muddadaa rubuc qarniga ah, inaga oo aan aqoonsi haysan aynu ku tallaabsannay horumar weyn oo la taaban karo, taas oo Somaliland ka dhigtay xaqiiqo jirta, oo nin neceb iyo mid jecel toonna aanu dafiri karin.
Dhinaca kale, waxaynu taabo-galinay nidaam-siyaasadeed oo ku dhisan habka Xisbiyada badan, iyo doorashooyin xor ah, taas oo aan ka tis-qaadin qaaradda Afrika inteeda badan.
Mudanayaal iyo Marwooyin, Inkasta oo aynu xaqiijinnay guulaha aan soo sheegay, Somaliland waxay la waddaagtaa waddammada soo koraya caqabado tiro badan, sida dhinacyada dhaqaalaha, arrimaha bulshada, deegaanka, shaqo la’aanta, saboolnimada, iyo tayeynta maamulka dawladnimo. Waxa si weyn inoo saameeyey abaaro soo noq-noqonaya, oo ay sabab u tahay isbeddelka cimillada dunidu, kuwaas oo inagu keenay hoos u dhac dhaqaale.
Mudanayaal iyo Marwooyin, Si arrimahaas xal loogu raadiyo, Xukuumadda Xisbiga Kulmiye, ee aan gadh-wadeenka ka ahay, waxay diyaarisay markii ugu horreysay, qorshe dhammaystiran oo qarankani leeyahay, kaas oo la magac baxay Qorshaha Horumarinta Qaranka, ee 5-tii sanno ee la soo dhaafay (National Development Plan One). Qorshahaasi wuxuu ka turjumayey baahida Bulshada Somaliland, iyo mudnaanshaha mashaariicda deegaannada kala duwan ee Dalka. Dhinaca kale, waxaanu jaan-goynay hiigsiga iyo himillada qarankani leeyahay ilaa 2030-ka.
Mudanayaal iyo Marwooyin, Waxa maanta farxad weyn inoo ah, in aynu daah furno qorshihii labaad ee horumarinta qaranka 2017 ilaa 2021. Qorshahani, waa mid dedaal badan la galiyey, oo ku sallaysan xog, xaqsoor iyo xaqiiqo dhab ah. Qorshahani, waa mid ay taladiisa ka qayb-qaateen dadka iyo deegaanada, ay sida tooska ah iyo sida dadban u khusayso. Qorshaha Horumarinta qaranka ee labaad, wuxuu mudnaan siinayaa sidii loogu tallaabsan lahaa horumar ballaadhan 5-ta sanno ee soo socda, si gaar ah, wuxuu u abbaaraya
Ø Kor u qaadidda Wax-soo-saarka Dalka; Sida, Dalagga Beeraha, Kalluumaysiga, Beeyada iyo Casriyeynta Nidaamka Xoolo Dhaqashada.
Ø Ka hortagga Abaaraha iyo La-noolaanshaha Is-beddelka Cimillada Adduunka.
Ø Kor u qaadidda Maamul-Wanaagga iyo Xuquuqda iyo Xoriyaadka Muwaadiniinta.
Waxaan aamin-sanahay, in uu qorshahani qaranka u hor-seedi doono, isbeddel laxaad leh iyo horumar ballaadhan.
Siyaasadda Qarankan, waxa udub-dhexaad u ah talo-waddaag iyo isku tashi, hoggaankiisuna waa qori isu-dhiib. Sidaa darteed, waxaan rejaynayaa in Madaxweynaha i beddeli doonaa uu xaqiijin doono Qorshaha Horumarinta Qaranka ee Labaad. Geba-gebadii, waxaan si weyn ugu mahad-naqayaa, Dawladdaha aynu saaxiibka dhaw nahay, ee Somaliland ka taageera Horumarka iyo Geeddi-socodka Dimuqraadiyadda, waxaan leeyahay; "LIBAAX NIN GALLADAY, IYO NIN GANAY, LABADABA WUU OG-YAHAY".
Waxaan ku boorrinayaa, dhammaan Bulshada Reer Somaliland, iyo Qaadhaan-Bixiyeyaasha, innaga taageera dhinaca horumarka, in ay ka qayb qaataan hirgelinta qorshahan.
Waxaan sidoo kale, farayaa dhammaan daneeyayaasha, in ay mashaariicda ay hirgelin doonaan ku saleeyaan Qorshaha Qaranka ee Labaad.
Ugu dambayn, waxaan u mahad-celinayaa Wasaaradda Qorshaynta Qaranka iyo Horumarinta, oo uu hormuud u yahay Wasiirka Wasaaraddu, Mudane, Maxamed Ibraahin Aadan (Qabyo-tire)..”
Ugu dambayn, Madaxweynuhu uu Shahaado-sharraf guddoonsiiyey Wasiirka Wasaaradda Qorsheynta Qaranka Somaliland iyo xubnihii kala shaqeeyey Diyaarinta Qorshaha Horumarinta Qaranka.